Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan Muqdisho (Sawirro) – Radio Muqdisho
Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan Muqdisho (Sawirro)
Hibo Jaamac Cabdulle “Dhegabadan” waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan magaalada Muqdisho, taasoo uu cudur halis ah uu kaga dhacay naaska.
Dhaqaatiirta ayaa caddeeysay in cudurka asiibay gabadhaasi aan dalka wax looga qaban Karin , balse ay u baahantahay in loo qaado dibadda si loo helo daryeel caafimaad.
Hibo Jaamac waa hooyo dhashay 7 caruur ah, qoyskeeduna ma awoodaan dhaqaale ay ugu qaadaan cafimaad dibadda ah.
Sidaasi darted waxaa laga codsanayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah, una damqanaya dhibaatada heysata walaashood Hibo Jaamac iney u soo gurmadaan gabadhaasi, si loogu helo daryeel caafimaad oo dibadda ah.
Fadlan xaaladda gabadhaasi kala xiriir Telefoonkan. +252617005260